🥇 ▷ Sida loo adeegsado Muuqaalka Tooska ah si loogu hagto Xaqiiqda La-jaan-qaaday ee Khariidadaha Google ✅
Sida loo adeegsado Muuqaalka Tooska ah si loogu hagto Xaqiiqda La-jaan-qaaday ee Khariidadaha Google
The Xaqiiqda Waxay gaaraysaa geesaha badan oo badan si ay isugu dayaan inay noloshu noo fududeyso. Waa teknolojiyad isku-dhafan jawiga dhabta ah iyo waxyaabo canaasiin ah shaashadda. Wax loo adeegsan karo waxyaabo sida madadaalo ah oo ah sidii lagu arki lahaa Pokémon jidadkeena dhabta ah, laakiin sidoo kale waxyaabaha ficil ahaan sida aragtida jihooyinka ee looga gudbayo isgoyska xiga. Waana tan waxa Google ካርታዎች hadda sameeyo.
Dhab ahaantii shaqada Live View ayaa jirtay tan iyo markii ay timid Google Pixel 3a. Mobil dhex dhexaad ah oo leh dhammaan adeegyada shirkadda, qaar sida horumarsan u ah muuqaalka cusub ee xiisaha leh ee khariidadaha Google. Hadda waxay umuuqataa in astaantan ay bilaabeyso in lagu arko taleefannada kale. Waxay nooga muuqatay Huawei P20 Pro, waana kan sida ay ugu muuqan karto adiga inaad adeegsato Muuqaal toos ah.
Ku hay dalabka Khariidadaha Google mid cusboonaysiin ah nooca ugu dambeeyay Si tan loo sameeyo, ku jooji Google Play Store Haddii aad haysato moobaylka Android. Halkan waxaad kala soo bixi kartaa cusbooneysiin kasta oo sugaya oo kicinaya shaqadan. Sikastaba, Google had iyo jeer waxay u adeegsataa muuqaaladeeda qaab wajiga ah. Marka ha rajo dhigin hadaad taas aragto Muuqaal toos ah Kama muuqdo mobiilkaaga. Wuxuu imaan doonaa goor dhow ama goor dhow. Xilligan la joogo waa nooc beta ama nooc tijaabo ah, sidaa darteed waa iska caadi in aan la helin dhammaan isticmaaleyaasha.
Marka tan la sameeyo, u gudub Qariiradaha Google oo raadso cinwaan kasta. Adeegso barta sare si aad ugu qorto magaca dariiq, dukaan, ama tixraac kasta oo u adeegta helida a halka loo socdo dalabka.
Kadib riix batoonka Sida loo helo si Khariidadaha Google ay kuu tusiyaan talaabo talaabo sida loo gaaro halka aad tageyso. Laakiin kiiskan ma danaynayno tilmaamaha caadiga ah ee khariidada. Haddii aad Live View firfircoontahay, hawshani waxay ka muuqan doontaa shaashadda hoosteeda, oo ku xigta batoonka Bilowga iyo liiska tallaabooyinka iyo wareegyada.
Marka ugu horeysa ee aad gujiso Muuqaalka tooska ah waxaa lagu weydiin doonaa dhaqaajiso rukhsadaha si aad u isticmaasho kamaradda terminal. Waxa kale oo jira tababbar yar oo aad ku ogaatid sida muuqaalka ‘Augmented Reality’ uu u shaqeeyo. Mar alla markii aan aragnay waxaas oo dhan waxaan bilaabi karnaa isticmaalka.
Isticmaalka aragtida tooska ah
Markaad dhaqaajiso Live View, waa inaad mobilkaaga kor u qaaddaa si aad diiradda u saarto wadada iyo dhismayaasha kugu xeeran. Xaqiiqdii, Khariidadaha Google ayaa ku weydiin doona inaad iskaan ka eegto dhismayaasha iyo boodhadhka hore ee kaa horeeya si ay kuu helaan Qaabkaan, iyo mahadsanid GPS, waad arki kartaa a khariidad yar xagga hoose ee shaashadda, halka astaamaha si toos ah loogu muujiyo dariiqa, oo ay kujirto Xaqiiqooyin La Yaqaan.
Maskaxda ku hay in mobiladu ogaato haddii aad dul dhigto miis ama meel siman. Marka, haddii aad joojiso inaad si toosan u qabato, waxaad u gudbi doontaa aragtida qariidada khariidada. Iyo dhanka kale. Wax aad u macquul ah oo loogu talagalay isu beddelo inta u dhexeysa aragtida caadiga ah iyo shaqada Live View.
Markaad isticmaasho Muuqaalka tooska ah waa inaad raacdaa tilmaamaha ku yaal shaashadda. Haddii aad wadada aado oo khariidadaha Google ay si sax ah u aqoonsadaan deegaanka, waad arki kartaa sida ay u sarreyso leexashada xigta. Ama hayso dhamaan tixraacyada aad u baahan tahay si aad naftaada ugu hesho shaashadda.
Dabcan, maskaxda ku hay in shaqadan loo diyaariyey safarro socod oo keliya. Intaas waxaa sii dheer, waa muuqaal beta ama astaamo tijaabo ah, sidaa darteed ka taxaddar markii aad u adeegsaneyso tixraac ahaan: waxaa laga yaabaa in gebi ahaanba aan lagu kalsoonaan karin. Waxa ugu fiican ayaa ah inaad had iyo jeer u adeegsan kartid Khariidadaha Google qaab joogto ah adoo diiradda saaraya waddada.
Warar kale oo ku saabsan… Khariidadaha Google